Izicelo-i-Shanghai Mingke Process Systems Co., Ltd.
Ibhanti yentsimbi yokucinezela ibhanti kabini
Wood based panel flat ucinezela umgca imveliso ithatha inkqubo yokucinezela ibhanti kabini, esebenza ngamabhanti entsimbi aphezulu nasezantsi'continuous operation.
Ibhanti yentsimbi yeMende Press
Ibhanti lentsimbi locinezela iMende lithwele uxinezeleko oluphezulu kakhulu, kuba iibhanti zithwele uxinzelelo oluqhubekayo lokugoba kunye noxinzelelo lobushushu.
Ibhanti yentsimbi yokuqina kweMingke idlala indima yecandelo eliphambili kwiinkqubo ezininzi zenkqubo yokwenziwa kwemizi-mveliso.
Ibhanti lentsimbi yeRotocure
Oomatshini bokunyanga i-Rotary (i-Rotocure) sisixhobo esiqhubekayo se-rubber ye-vulcanization, exhotyiswe ngebhanti yentsimbi ephezulu ukuphumeza imveliso eqhubekayo.
Ibhanti lentsimbi yeVulcanizer yePlate
I-Flate Vulcanizer sisixhobo esikhethekileyo semveliso eyahlukeneyo yerabha ebunjiweyo yokubumba i-vulcanization, ukucwangciswa kwepleyiti yentsimbi ekumgangatho ophezulu, inokuphucula umgangatho wemveliso, inciphise ukuphindaphindwa kokutshintshwa.
Iibhanti zentsimbi zokupholisa iFlaker
Iibhanti zentsimbi ze-Mingke zisebenza kakuhle ekuxhathiseni umhlwa, ngoko ke isetyenziswa ngokubanzi kushishino lwemichiza koomatshini bokugqatsa ukuvelisa iiflekhi zekhemikhali njengomhambisi wokupholisa.
Iibhanti zentsimbi zokupholisa iPastillator
I-pastilator yokupholisa ibhanti yentsimbi luhlobo lwezixhobo zenkqubo yokunyibilika kwegranulation.Izinto ezinyibilikisiweyo ziwela ngokulinganayo kwibhanti yentsimbi ehamba ngesantya esifanayo.
Ibhanti yentsimbi yeOveni yeTonela yokubhaka
Iibhanti zentsimbi zeCarbon zaseMingke zisetyenziswa ngokubanzi kwishishini lokutya, njenge-oveni yokubhaka yokubhaka.Kukho iintlobo ezintathu zee-ovens: i-oven yodidi lwebhanti yentsimbi, i-oven yohlobo lwe-mesh belt kunye ne-oven yodidi lweplate.
Ibhanti yentsimbi yeMveliso yeChocolate
Iibhanti zentsimbi ze-Mingke zisetyenziswa ngokubanzi kwishishini lokutya, njengomgca wokuvelisa itshokolethi.
Ibhanti yentsimbi yesixhobo sokudlala ifilimu
Ibhanti lentsimbi elikhazimlisiweyo leMingke linokusetyenziswa kwisixhobo sokuphosa ifilimu.Ukuphoswa kwefilimu kusetyenziswa kakhulu kwimveliso yokuPakisha iifilimu zeplastiki, iifilimu zokucoca kunye neefilimu zeplastiki ezisebenzayo ezininzi, iipod zokuhlamba iimpahla kunye nezinye iindawo.
Ibhanti yentsimbi engatyiwayo yokwenza iPhepha
Ibhanti yentsimbi ye-Mingke ingasetyenziswa kushishino lokwenza iphepha kumatshini wokwenza amaphepha e-calendering.Ngokuqhelekileyo ibhanti libanzi kakhulu, ukuya kuthi ga kwiimitha ezili-9 ububanzi, ngelixa ubukhulu bebhanti bujikeleze i-0.8mm.
Ibhanti yentsimbi yoVavanyo lweTire lweziThuthi
Ibhanti yentsimbi ye-Mingke inokusetyenziswa kwishishini leemoto ukuvavanywa kunye novavanyo, njengokuhlalutya kwetonela yomoya, iimvavanyo zamatayara kunye neenkqubo zoyilo lwesithuthi.